Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii Ururka haweenka Jaaliyada London oo looga hadlay Tacadiyada soo gaadha Haweenka
Shirkii Ururka haweenka Jaaliyada London oo looga hadlay Tacadiyada soo gaadha Haweenka
Posted by ONA Admin	/ June 14, 2015
Shir aad u weyn oo ay isugu yimaadeen Ururka Haweenka Soomalida Ogadeniya ee Jaaliyada London ayaa guul kusoo dhamaaday Sabtidii 13 June 2015. Shirkan oo ay kasoo qeyb galeen dad kor u dhaafaya 200 haween ah oo xubno ka ah ururka haweenka jaaliyada London waxa kasoo qeyb galay oo shirkan furay Gudoomiyaha Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya, Culumaa u diin iyo aqoonyahanka Somalida Ogadeniya oo shirkan qeybtii hore ee furitaanka ka qeyb qaatay.
Gudoomiyaha Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya ayaa aad ugu amaanay horumarka ay haweenku gaadhsiiyeen halganka shacbiga somalida Ogadeniya isaga oo sheegay in cududa ugu muhiimsan ee halgankani uu yahay haweenka. Gudoomiyaha ayaa aad ugu bogay dhaqdhaqaaqa Ururka Haweenka Jaaliyada London oo dhinac bulsho, dhinac siyaasadeed iyo abaabulba ah urur tayo iyo tiroba muujiyay.
Gudoomiyaha ayaa Ururka haweenka uga waramay xaalada guud ee halganka Somalida Ogadeniya iyo gaar ahaan marxalada Halganku uu hada marayo. Gudomiyaha ayaa sheegay in Wadadii Xoriyada Cagta lasaaray cid loodin kartaana aysan jirin Xaqu dirirka JWXO.
Shirkan ayaa sidoo kale lagasoo jeediyay wacyi diini ah oo uu soo Jeediyay Sheekh Cabdulaahi Sheekh M Sagal. Waxaa kale oo kulankan ka hadlay Madax kamida Golaha Dhexe ee JWXO. Intaas kadib waxaa gooni isugu hadhay Ururka Haweenka Jaaliyada London.
Ururka Haweenku Shirkan waxay soo Bandhigeen Tacadiyada Gaarka ah ee soo gaadha Haweenka Somalida Ogadeniya iyo sidii loogu guntan lahaa sidii haweenkaas loo badbaadin lahaa waxna loogu qaban lahaa. Waxaa kale oo ay ka doodeen Sidii sharciyada caalamka loo adeegsan lahaa Aduunweynahana loogusoo bandhigi lahaa Tacadiyada haweenka iyo Caruurta ay u geystaan ciidamada Gumeysiga Ethiopia.
Shirkan oo maqal iyo muuqaal ah waxaad kadaawan doontaan ilaystv.